Izivumelwano ze-5 kwiingxaki zezopolitiko - ii-Geofumadas
Izivumelwano ze-5 kwiinkathazo zezopolitiko
NgoJuni, 2009 Internet kunye neBlogs, Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Ndizamile ukugcina le bhulohlu ngaphandle kwezihloko ezikhokelela ekuziphatheni kwaye kubangela ukuba umphefumlo ugxininiswe yimibono ethile (ngaphandle kwebhola lebhola); kodwa, ukuba uphile iminyaka ethile, ukuba usebenze abanye, ukuba uzalwe apho kwaye uhlakulele ubuhlobo kunye nabemi abaninzi baye benza okungenani ukunikezela isithuba sokungqinelana kwesi sifundo.
Ndibhekisela kwimeko yeHonduras, apho ulawulo lwentando yesininzi kwiminyaka emininzi luya kuphelisa ngaphandle kokuba kukho into engaphelelekanga. Emfanekisweni weepikseli ze-450 ezingabonakaliyo kwimaphu, kuphela i-2% yeendwendwe zeentsuku ezimbalwa zokugqibela zifikile kule bhulogi evela kweli lizwe, kwanelo lizwe elithoba.
I-Honduras yayihlala phantsi komthunzi weengqungquthela malunga nekhulu lokugqibela, zithetha iingcali kulo mbandela (ukuba ziphile kwaye zingabi nazi) ukuba kweli lizwe i-3 ifile yanele ukuba ibe yi-coup d'etat. Amajelo eendaba ngamazwe asithumela oko bakwazi ukukuqonda kakuhle, simele silapha ukuze siqonde (ukuba oko kuya kwenzeka).
Ngaphandle kokuzama ukuba yi-ideologist, uyazi ukuba umgaqo-nkqubo awuhambelani nefom ye-dwg, zezi zivumelwano ezihlanu:
1 Iyona nto iphambili inkohlakalo
Kuwo onke amazwe ethu aseLatin America le nto yintsholongwane eyonakalise ukuthembela kubangcali bezopolitiko, siyazibuza nokuba kukho abantu abakhohlakeleyo abangenza utshintsho olubalulekileyo kwintlalo yesininzi.
Akukho mntu unokukhanyela, ukuba ekuhlaleni kwakhe kukho uluhlu lwabapolitiki abaneminyaka eyi-30 esondeza kwi-boob yorhulumente, kwaye baya kuqhubeka behlala kwi-30 ngaphezulu, bazuze igama labo lokugqibela kubantwana babo. Oku kwenzekayo kwihlabathi lonke, kodwa lukhohlakele kwaye luvalela ithuba kubantu abangenazopolitiki abanomdla omkhulu ... kwaye bakholwe okanye cha, banokucinga ngeengcamango ezichanekileyo.
2 Kukho ityala lentlalo, ekufuneka lihlawulwe
Xa uthetha nabahlobo, abaneemeko zezoqoqosho ezilungileyo, bona ngokwabo bayaqonda ukuba kukho ityala elikhulu lentlalo ukuhlawula. Le meko kamva okanye iyaphula, kwaye abantu bazimisele ukuthatha ithuba.
Ndiyayithanda iimeko ezentlalo kwilizwe apho abaninzi baninzi badla mT3rda, unesihe ukuba iintlobo zobunkokeli bokhohlo ziyimimiselo emibi yokulandela. Kodwa ukuxubusha kwezentlalo kuyimfuneko ekutshintsheni, kwenzeka ntoni, ityala lezentlalo kufuneka lihlawulwe ngumntu ... ngelinye ilanga; Siyathemba nje ukuba ayikhokheli i-72,000 yase-El Salvador.
Ekugqibeleni, kufuneka kwenzeke ngenxa yokutshintsha.
3 Isizukulwana se-Facebook kufuneka siphume
Kodwa sonke siyazi ukuba izizukulwana ezitsha kufuneka zivele, kwaye kungekhona izindlalifa zezopolitiko zabazali bazo. Kunzima ukumbona ukuba emva kweentsuku ezimbini, akukho nantoni, iinjongo ezilungileyo kuphela, kodwa akukho zicwangciso ezicacileyo.
Ngenxa yoko, inkokheli entsha kufuneka ivele, kufuneka bayisebenzise imeko ukuba benze umcimbi, benze izicwangciso ngaphandle kokuphelelwa ithemba baze benze indlela yabo ngaphandle kokulahlekelwa ukuthembeka kwesininzi. Ithuba lokuthabatha amandla, baya kuba nalo ngexesha labo, kodwa emva koko abayikulibala ukuba bayisizukulwane se-Facebook (ukuba banike igama).
4 Akukho mntu unenyaniso epheleleyo
Andifuni ukuwela kwimpazamo efanayo, akuyi kuze kube yinto enyanisekileyo kule nto, kuba ukuba siya ezantsi, wonke umntu uyasolula; ezinye zokubamba, abanye ngenxa yokungenzi, ezinye zokuzivumela ukuba ziphathwe, ezinye zikholelwe ukuba zikhanyiselwa ukuba bonke abantu bangalunganga. Kodwa ekugqibeleni, kukho imigaqo evunyelwanga yiyo yonke, oku kufuneka ilandelwe xa isebenzayo, iyazi ukuba emva kwexesha abayi kuphelelwa ngumsebenzi kuba imodemokhrasi imodeli iyenzayo.
5 Ukugqithisa kokubili akusisombululo
Esinye siphelo sivikela izizathu zentlalo, enye ivikela ubukhosi, enye ibango kuthiwa egameni labantu, enye ibango ukuba ngabantu, enye ithi sele ihamba, enye ifuna ukufika. Kodwa zombini ukugqithisa kubonakala kungabonakali isisombululo okanye kubonakalise ukuba kunjalo.
Izigwityu zokuqhaqha zamagcini kunye neengcambu ezigqityiweyo ekupheleni kwesisinxele asisisombululo. Amazwe afuna ukucwangcisa ixesha elide kunye noqeqesho abakhethayo ukuyeka ukuze wonke umntu anqobe, endaweni yezenzo zokulwa nomlilo ukuhambelana noko "ingqondo yam" ithi ndifanele ndikholise.
Kunyaka ophelileyo ndiseveki eBolivia, nje ngexesha lokuvukela eSanta Cruz, kunye noko ndikubona ukuba iinyaniso zamajelo ezizwe ngamazwe azizange zikhangeleke njengento abantu batshoyo kwindawo enye; iveki ecaleni kwe North America kwinqanaba eliphakathi, kwaye ucinga ntoni ngo-Obama kunye nelizwe lakhe elinye ibali; Ndandisondele ekubeni yinkedama xa iMfazwe yaseFarabundo Martí iphoqa ukuba ndibaleke; Ndichitha iminyaka emininzi ndisebenzela umntu ochitha ixesha lakhe lokukhulula ebhala umbono welizwe, ngaphandle kokuceba ukuba ngumongameli.
Ngoko xa abahlobo bam baseSpanish badibana nami kwi-Facebook ingxoxo eqhubekayo, ndandithandabuza ukuba ndibaxelele oko ndacinga okanye ndiyithumele kumajelo anamaqiniso anzulu. Kuba ukuba ndiqonda into yile nto ebomini, akukho mntu unalo inyaniso ... ngaphandle kwam.
U nga kuma bucala ufike uzifihle ngakwilitye 985 amazwi alo post, beqonda ukuba ngoxa abanye ubunzima ukusuka crisis ufuna isicwangciso engaphaya kwelinye icala, ndingaya ukubaleka imizuzu 45, kunye iPod, unyana wam, athathe yoloyiko bachithe imali olungenasiphelo ngokuhlawula kwikhadi lam letyala, ukumamela izimvo eendaba nenzolo kubuyela endlwini yam apho abantwana bam babelindele ukuba zidlale Wii.
Yintoni eyenzekayo kukuba andisayi kuva ndiyaneliseka.
Ukuba uya kwenza, yenza oko kwimigaqo yakho, ndiyindlovu yezobuchwepheshe, kungekhona i-ideologist. Kodwa wena, awudingi isiluleko malunga noko ufanele ukwenze.
Landela iinjongo zakho
Post edlulileyo«Edlulileyo Bonisa umfanekiso we georeferenced kwiGoogle Earth
Post Next Ukuqhuma kwenzekaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 "Izivumelwano ze-5 malunga neengxaki zezopolitiko"
Ngokomntu ndiyakholwa kumandla eMfundo. Kulixesha elide lokutyala. I-qhinga iza kuba: Siye wanyamezela amashumi eziliqela (ndithetha ngelithi Latinoamericano ukususela iinkqubo ziyafana onke amazwe) into abakhohlakele (sisoloko khetha abonakele ubuncinane). Nabani na urhulumente imini, intloko abagulayo Les ukuphucula mali lwemfundo, umgangatho ootitshala, iziseko zophuhliso zezikolo, eyunivesithi ezamahala zoluntu, Imibutho State Uphando, iimali abucala ukuba imfundo kunye nophando, njl njl njl ...
Kwiminyaka embalwa emininzi, kunye nobutyebi obudumileyo, KUFUNDWA, nje ukukhohlakele kuya kubonwa, ilanga, lichazwe kwaye lixoki, libonakaliswe. Yonke iya kuphucula. IMFUNDO YEMFUNDO YONKE ... (yiyiphi ipolitiki enokuthi ibhekane phakathi kweli phulo? ... Kakade, ke kufuneka umkhumbuze oko akutshoyo.)
Ukubulisa kunye nenhlanhla kubantu baseHonduras.
Into entsha kufuneka ivele kule nto yothusayo. Ndinethemba lokuba ngokuqhanqalaza kwabatshutshisi iqela liza kuvela eliza kuthatha ukuthembeka, kwaye ngelishwa baye baba isenzo sabo bengakhange babone.
Kodwa kufuneka ube nethemba, abantu banokukhathala okufanayo, nangona kuphela ukuphendula okubenza bajonge izisombululo.
Ewe, u-Master Alvarez waphuncuka emsebenzini wam okwethutyana ukuze ndibhale kancinci i-4 URNA, ethathe ilizwe liye kumda we-colpaso kwaye ngaphandle kwamathandabuzo abachaphazeleki kakhulu ayisiyi-BHUSI okanye iRIVOLUTIONARY kuba omabini la maqela anemali, iindawo zokuhlala. iipropathi ezingaphandle kweHonduras, ezichaphazeleka kakhulu sithi NGABANTU abasebenza mihla le ukuzisa isonka semihla ngemihla kumakhaya ethu. Bekumele kwenzeke ntoni ewe kwaye kuyabonakala ukuba ifikile imini, kodwa ngubani onokukholelwa kuye? oosomashishini abaye basibethelela kule ntlupheko okanye kwi-MELISTS abagqibe ngazo zonke izixhobo zokutyala imali kwiziseko zophuhliso ukukhuthaza i-whims yabo kwaye ihlale isemandleni, endiqinisekisa ngento eya kwenzeka kwixesha elizayo ... Into ayilunganga kwaye ayiyiyo Siyazi ukuba izophela ngeli xesha, kodwa ukuba ubuNtlupheko kunye noRhwaphilizo buya kulandela ukuba ngubani oshiyekileyo ukuba aqhubeke ... Ngeli xesha le Manuel «Mel» Zelaya phantse 90% to be Conservative of imisebenzi yemisebenzi yoluntu uyifumana xa unika. I-premium kubaqeshwa okanye kumashishini asezantsi, ukuba bayaqhubeka bayakuba kwimeko enye kwaye ukuba abaqeshi babuyela kulawulo sizakuqhubeka nabasebenzi kunye neengcali ezifumana imivuzo yendlala kwaye zilawula noorhulumente beli xesha LONTO INDLELA YOKUXELISA INDLELA YAM? LE YINYANISO YINYANISO